Lavazza Idola Ny Milina Kafe - Famolavolana
Ny Milina Kafe Vahaolana tonga lafatra ho an'ireo tia kafe mitady ny traikefa espresso italiana mety ao an-trano. Ny fifandraisana an-tanana momba ny lozisialy mampihetsi-po miaraka amin'ny valin-kaontin'ny akoustika dia manana fisafidianana efatra ary fampisondrotana ny mari-pana manome mari-pahaizana ho an'ny tsiro rehetra na fotoana. Ny milina dia manondro rano tsy hita, fonosana feno feno na ny filana hidina amin'ny alàlan'ny sary masina misy hazavana sy ny làlan-dabia. Ny famolavolana miaraka amin'ny fanahy misokatra, ny fidirana amin'ny kalitao ary ny antsipirihany amin'ny antsipirihany dia fivoaran'ny fiteny noforonin'i Lavazza.
Anaran'ny tetikasa : Lavazza Idola, Anaran'ny mpamorona : Florian Seidl, Anaran'ny mpanjifa : Lavazza.
Ny Milina Kafe Florian Seidl Lavazza Idola